Izindaba - Ucwaningo olusha luthi ukudla kwe-vegan kunempilo ngokulinganayo ezifuyweni
Isoseji & Ham Production
Ukwakha Imikhiqizo Ukucutshungulwa
Ukukhiqizwa Kwe-noodle & Pasta
Isixazululo Sokukhiqiza I-Petfood
Ukucubungula Ukudla Okuqandisiwe
Ukukhiqizwa Komkhiqizo Obhakiwe
I-Snack Food Production
Eminye Imikhiqizo Emisha
Sesha Ngemikhiqizo Yesoseji
Sesha Ngokwenza Imikhiqizo
Sesha Ngemikhiqizo Ye-pasta
Sesha Ngokudla Kwezilwane Ezifuywayo
Search By Snack Food
Amandla kanye ne-R&D
Ukubuka kwe-VR kwasefekthri
Ucwaningo olusha luthi ukudla kwe-vegan kunempilo ngokulinganayo ezifuyweni
Ngokocwaningo olunethemba lokukhuthaza ukudla okusekelwe ezitshalweni kwezilwane ezifuywayo, ukudla okudliwa yizilwane kwamakati nezinja kungase kube okunempilo njengokudla kwenyama.
Lolu cwaningo luvela ku-Andrew Knight, uprofesa wezokwelapha zezilwane eNyuvesi yaseWinchester.U-Knight uthe ngokwemiphumela ethile yezempilo, ukudla okusekelwe ezitshalweni kungase kube ngcono noma kube ngcono kunokudla kwezilwane ezifuywayo, nakuba izakhi zokwenziwa zidingeka ukuze uqedele ukudla.
E-United Kingdom, lapho iNyuvesi yaseWinchester ikhona, abanikazi bezilwane ezifuywayo abahluleka ukuphakela izilwane ezifuywayo “ngokudla okufanele” bangahlawuliswa imali engaphezu kuka-$27,500 noma baboshwe ngaphansi koMthetho Wenhlalakahle Yezilwane ka-2006.Umthethosivivinywa awusho ukuthi ukudla kwemifino noma imifino akufaneleki.
UJustine Shotton, uMongameli weNhlangano Yezilwane YaseBrithani, wathi: “Asikukhuthazi ukupha izinja ukudla okudliwa yizilwane ezifuywayo, ngoba ukulinganisela okungalungile kokudla okunomsoco kulula kakhulu kunokulungile, okungaholela ekuntulekeni kokudla kanye nengozi yezifo ezihlobene nalokho.” , Tshela uMgqumeni.
Ochwepheshe bezilwane bathi izilwane ezifuywayo zidinga ukudla okunomsoco futhi zingase zibe nezidingo eziqondile zokudla okunomsoco, futhi ukudla kwe-vegan cishe akunakwenzeka ukuhlangabezana nalezi zidingo.Nokho, imiphumela yocwaningo luka-Knight ikhombisa ukuthi ukudla kwezilwane ezifuywayo ezitshalweni kuyalingana ngokomsoco nemikhiqizo equkethe inyama.
“Izinja, amakati nezinye izinhlobo zezilwane zinezidingo zokudla okunomsoco.Abayidingi inyama nanoma yiziphi ezinye izithako ezithile.Badinga isethi yemisoco, inqobo nje uma benikezwa ukudla okumnandi okwanele, bayoba nomdlandla wokuwudla futhi kube lula ukugaya., Sifuna ukubabona bechuma.Yilokhu okubonakala kukhomba ubufakazi,” kusho uKnight etshela iGuardian.
Ngokusho kuka-Hill, nakuba izinja ziyi-omnivores, amakati ayizilwane ezidla inyama, futhi ukudla kwazo kudinga amaprotheni athile, kuhlanganise ne-taurine.
Ngokusho kweWashington Post, izilwane ezifuywayo eziyizigidi ezingu-180 emakhaya aseMelika zidla inyama yenkomo, iwundlu, inkukhu noma ingulube cishe kukho konke ukudla, ngoba ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okuvela ekufuyweni kwezilwane kubangela u-15% wegesi ebamba ukushisa emhlabeni jikelele.
Abacwaningi eNyuvesi yaseCalifornia, eLos Angeles balinganisela ukuthi izinja namakati anomthelela ofinyelela ku-30% wemvelo wokusetshenziswa kwenyama e-United States.Ngokusho kwe "Washington Post", uma izilwane ezifuywayo zaseMelika zakha izwe lazo, ukusetshenziswa kwazo kwenyama kuzoba endaweni yesihlanu emhlabeni.
Ngokocwaningo olwenziwa nguPetco, izinkampani eziningi zokudla kwezilwane ezifuywayo seziqalile ukwenza ezinye izindlela ezisekelwe ezinambuzaneni zezinja namakati, kanti amakhasimende angama-55% athanda umqondo wokusebenzisa ezinye izithako ezisimeme zamaprotheni ekudleni kwezilwane ezifuywayo.
I-Illinois muva nje ibe yisifunda sesihlanu ukuvimba izitolo zezilwane ezifuywayo ukuthi zithengise izinja namakati kubafuyi, nakuba zivunyelwe ukusingatha imicimbi yokutholwa kwamakati nezinja ezindlini zokukhosela izilwane nezinhlangano zokuhlenga.Umthethosivivinywa uhlose ukuqeda izindawo zokudla ezihlinzeka ngezindawo zokudla zezilwane eziningi ezingabangane ezithengiswa ezitolo.
U-Shepard Price uneziqu ze-master in journalism azithola e-University of Texas futhi uhlala e-St.Sebeneminyaka engaphezu kwemine besebuntathelini.
Isikhathi sokuthumela: Oct-23-2021
I-Hebei Ainister/Hebei Helper Food Machinery
Imikhiqizo Eshisayo Imephu yesayithi
Ulayini Wokukhiqiza Amanoodle Omusha IFrozen Dumpling Production Line Umshini Wokuxuba Inhlama yePizza Ulayini Wokukhiqiza Ukudla Kwezilwane Ezifuywayo Ulayini Wokukhiqiza Ukudla Kwezinja ICanned Pet Food Production Line